बोली अनुसारको व्यवहार::Online News Portal from State No. 4
बोली अनुसारको व्यवहार
बागलुङमा दश वटा स्थानिय तह छन् । दश स्थानिय तहका सबै जनप्रतिनिधिहरुलाई यदि कसैले सोध्यो भने उनीहरुको विकासे योजनामा प्राथमिकतामा कृषि र पर्यटन रहेको बताउने गरेका छन् । बार्षिक बजेटको झण्डै आधा बजेट चालु खर्चको लागि खर्चिने स्थानिय तहहरुले पुँजीगत बजेटको अधिकांश रकम सडक निर्माणका लागि छुट्टाएका छन् तर उनीहरुको प्राथमिकतामा भने कृषि र पर्यटन पर्ने गरेको छ । कृषि र पर्यटनको लागि किन सडकमा बजेट भन्ने आँट कसैले ग¥यो भने उनीहरुको सहज जवाफ आउने गरेको छ । बाटो बिना कुनैपनि विषयको विकास सम्भव छैन् । बाटोमा खर्च गर्नु भनेको पनि कृषि र पर्यटनका लागि नै हो । गत बर्षको बजेटमा अधिकांश रकम सडकमा खर्च गरिरहेका स्थानिय तहले आगामी बर्षको बजेटमा पनि सडकका लागि बजेटको सिमा निकै ठुलो बनाउने कुरामा शंका छैन् । यतिबेला आगामी बर्षको बजेटको लागि सबै स्थानिय तहले प्रारम्भीक चरणको छलफल चलिरहेको छ ।
टोल, वडाहुँदै गाउँ तथा नगर तहसम्म चलिरहेको योजना तर्जुमा गोष्ठीहरुमा अधिकांश योजना सडकका लागि नै प्राथमिकता दिईएका छन् । सडकमा लगानी गर्नै हुन्न भन्ने हैन तर अत्यावस्यक सडकबाहेक अहिले विकासका नाममा खनिएका कयौं सडकहरु कामबिहिन अवस्थामा छन् । कुना कन्दरासम्म पु¥याउन भन्दै सडक बनाईएको छ । खानेपानीको, अभाव, बिद्युतको आपुर्ति नभएको, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयमा चरम अभाव रहेको क्षेत्रमा समेत सडक छ तर तिनै विकासका अन्य पुर्वाधारको अभावका कारण बस्ती बिस्थापित बनेका छन् । जनताको सहजताका लागि भनेर खनिएका बाटाको उपभोग गर्ने जनता नै ठाउँ छोडेर हिँडिसकेको अवस्थामा बाटोहरुको काम के ? पुर्वाधार विकासको नाममा बाटो मात्रै देख्ने जनप्रतिनिधि र आम सर्वसाधरणको सोचमा अब पनि परिवर्तन नआउने हो भने राज्यको लगानी बालुवामा पानी बन्ने कुरामा निश्चित छ । त्यसैले विकासको पुर्वाधार सडक मात्रै हैन अन्य आधारभुत आवश्यकतालाई पनि सडक सँग–सँगै अघि बढाउनको लागि अब बन्ने बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
अर्को कुरा जसरी जनप्रतिनिधिको ओठमा झुण्डिएर बसेको छ पर्यटन र कृषि । त्यही हिसाबको बजेटको सम्बोधन पनि आवश्यक छ । जिल्लाको भौगोलिक स्थिती र बनौटलाई नियाल्ने होभने यहाँको आर्थिक उन्नतीको माध्यम भनेको कृषि र पर्यटन नै हो । पर्याप्त पर्यटकिय स्थलहरुको उपलव्धता, खेतीयोग्य जमीन, बन पैदावार र सिंचाईका लागि समेत खोलानालाको प्राप्त उपलव्धता रहेको जिल्लालाई पर्यटन र कृषिको पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सक्ने होभने यहाँका नागरिक सम्पन्न बन्न समय लाग्दैन । तर भनाई एकातर्फ र गराई अर्कोतर्फ भएका कारण सुरुवात नै नभएको कृषि र पर्यटनको विकास कसरी हुन्छ ? यदि जनप्रनिधिले सच्चा हृदयले यहाँको कृषि र पर्यटनमा विकास चाहेका हुन्भने आगामी वर्षको बजेटमा दिर्घकालिन सोच बनाएर यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । बजेटले उनीहरुले भनेका विषयलाई महत्वका साथ सम्बोधन गर्नु आवस्यक छ ।